ရွှေနိုင်ငံ: March 2012
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် တပ်မတော်သားတစ်ဦး၏ ရိုးရှင်းပွင့်လင်းသောအမြင် ( အပိုင်း - ၁ ) မှ အဆက်
From : တပ်မတော်သားတစ်ဦး
Posted by အနာဂါတ်လူငယ် at 02:032comments:
တော်တော်လည်း အဖောကောင်းတဲ့ သစ်ထူးလွင်
တော်တော်လည်း ရီရတဲ့ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်တွေပဲဗျာ... ဘာတဲ့ မြန်မာအစိုးရက သစ်ထူးလွင် ၀က်ဆိုဒ်အား မြန်မာပြည်တွင်းမှ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုလို့ မရနိုင်အောင် ယနေ့တွင်ပိတ်ထားလိုက်ပါပြီတဲ့... အဘယ်ကြောင့်ပိတ်ရ သလဲဆိုတော့ ၄င်းဝက်ဆိုဒ်မှာ ဖော်ပြထားသည်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ် ။ ။
www.thithtoolwin.com Myanmar News Now မှ မြန်မာပြည်သူ့ တွေ၏ မတရားပြုကျင့်ခံနေရမှုတွေ၊ ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ ဖြိုးရေးပါတီထိပ်ပိုင်ခေါင်းဆောင်များ၏ သတင်းများ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုစရင်းစစ်ချုပ်ရုံး ၊ သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန စတဲ့ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရ၏ ထိပ်တန်းလျှိုဝှက်ချက်သတင်းများကို ပြီးခဲ့တဲ့ အခုရက်ပိုင်းအတွင်း ဆက်တိုက်ဖော်ထုတ်တင်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ မသမာမှုများနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းသတင်းများကိုလည်း Myanmar News Now မှ ပုံမှန်တင်ပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပဖို့ရက်ပိုင်းအလိုမှာ အများပြည်သူ ကြည့်ရှုနေတဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာကို ပိတ်ဆို့ လိုက်မှုနှင့်ပါတ်သတ်၍ ပြည်တွင်းမှ ပြည်သူပြည်သားများ၊သတင်းမီဒီယာများ၊ နိုင်ငံတကာ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင် အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး မြန်မာအစိုးရမှ www.thithtoolwin.com Myanmar News Now ကို ပြည်တွင်းမှာ ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်အောင် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပိတ်ဆို့ထားမှုကို ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးဖို့မြန်မာအစိုးရထံ တိုက်ရိုက်တောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ။Myanmar News Now ကို မြန်မာပြည်သူလူထု နေ့စဉ် လူဦးရေ (၃၀၀၀၀)သုံးသောင်ကျော်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီး၊ သတင်းစာမျက်နှာပေါင်း တစ်သိန်းကျော် ၀င်ရောက်ဖတ်ရှုနေတာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုမရအောင် ပိတ်ဆို့ထားသော သစ်ထူးလွင်ဝက်ဆိုဒ်တွင်
မြန်မာနိုင်ငံမှ ၃၄ ဦး ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနေပုံအား မြင်ရပုံ
သို့သော် ၄င်းဝက်ဆိုဒ်၏ စာမျက်နှာတွင် အထက်ပါအတိုင်းတွေ့ရှိရပါတယ် ။ ယုံကြည်သင့်လား မယုံကြည် သင့်သလားတို့ မိမိတို့ ဦးနှောက်ဖြင့်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ် ။
Posted by ရွှေနိုင်ငံ at 01:18 27 comments:
ပြည်သူတွေ အပေါ် စစ်တပ်နှင့် ကေအိုင်အေ မည်သူက အကြမ်းဖက်သလဲ ? (၇ုပ်/သံ)
တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များရှိ ဝေးလံခေါင်သီ၍ လူမှုရေးခက်ခဲသော မြို့နယ်နှင့် မြို့နယ်ခွဲ (၈၇)ခုတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်၇ှိသည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား ဒေသစရိတ်များ ခံစားခွင့်ပြု
ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီးရုံး၏ ၁၃၇၃ခုနစ်၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော် ၈ရက်(၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၅) ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြေငြာစာအမှတ် (၁၀၁/၂၀၁၂)ဖြင့်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များရှိ ဝေးလံခေါင်သီ၍ လူမှုရေးခက်ခဲသော မြို့နယ်နှင့် မြို့နယ်ခွဲ (၈၇)ခုတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်၇ှိသည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား လစဉ် အပိုထောက်ပံ့ကြေး ၃၀၀၀၀ ကျပ်အပြင် လက်၇ှိလစဉ်ထုတ်ယူရရှိနေသောလစာနှင့် ညီမျှသည့်ငွေကိုပါ ဒေသစရိတ်အဖြစ် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ သတ်မှတ်ခံစားခွင့်ပြုလိုက်ကြောင့် ယနေ့တွင်နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြပါရှိပါတယ် ။ ။
Posted by ရွှေနိုင်ငံ at 23:13 No comments:
မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံ ပင်လယ်နယ်နိမိတ် အငြင်းပွားမှုပြဿနာ နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာမှ ရှင်းတမ်း
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အရှက်ရစရာ နေ့တစ်နေ့
ဒီမိုကရေစီကိုသာ ထိပ်တန်းတင်နေကြသော မြန်မာလူမျိုး အပေါင်းတို့ခင်ဗျား..... ခင်ဗျား...တို့ ပြည်တွင်းမှာ အချင်းချင်း လှည့်ပါတ် ခွေဖို့ပဲ စိုင်းပြင်းနေချိန်မှာ မနေ့က ဘင်္ဂလားနဲ့ ရေပိုင်နက် ကိစ္စ အဆုံးအဖြတ်မှာ မြန်မာနိုင်တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပေမယ့် ကမ်းလွန် လုပ်ကွက်တွေ ပါသွားပါတယ်ဗျာ....... ပုံထဲကဆိုရင် အပြာလိုင်း အပေါ်ပိုင်းလေး ပါသွားပါတယ်.....
ဘင်္ဂလားတွေက "This isagreat day for Bangladesh," declared Foreign Minister Dr. Dipu Moni, after listening to the President of the Tribunal, Jose Luis Jesus of Cape Verde, read the judgment in the Hamburg courtroom. အဲ့လို ထုတ်ဖော် ကြွေးကျော်သွားလေရဲ့....... သူတို့အနေနဲ့ နည်းနည်းရလဲ အမြတ်ပဲ ဆိုပီး မြန်မာကို တစ်စစီဖဲ့နေတာကို ခင်ဗျားတို့ ဒီမိုကရေစီ တော်လှန်ရေးနဲ့ မဆိုင်လို့ ကြည့်နေနိုင်ကြလား ခင်ဗျာ......
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ့သမိုင်းထဲမှာ သင်ခဲ့ရတဲ့ ရှင်မဖြူကျွန်းဆိုတာ အခုတော့ ၂ မိုင်ခွဲ ပါတ်လည် အနားကပ်ပိုင်ခွင့် မရှိတော့ပါ.... အစိုးရသိက္ခာကျ အရှက်ရရင် ပီးရော ငါတို့နဲ့မဆိုင် ဆိုတဲ့ အမျိုးသားရေး စိတ်ဓါတ် ကင်းမဲ့တဲ့သူများ ခင်ဗျား..... နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ဟာ အစားပြန်တောင်းလို့ မရပါဘူး..... ငါတို့ လက်ထက်မှ တရားတဘောင် ပြန်စွဲမယ်ဆိုလည်း လက်နက်ကိုင်စွဲရန်သာ ရှိပါတော့တယ်.... ဒီအစိုးရ သိက္ခာကျမှ ငါတို့ နိုင်ငံရေး အမြတ်ရမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်တိုင်းပြည်အပေါ်မှာ ချစ်မြတ်နိုးစိတ်၊ သစ္စာစောင့်သိမှု၊ တာဝန်သိတတ်မှုဟာ ဘာလဲ ဆိုတာ ပြန်မေးရပါလိမ့်မယ်......
ဒီအကြောင်း အရေးကြီးပါတယ်လို့ အတန်တန် သတိပေးတာကို ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲကို အာရုံလွှဲတယ်၊ လုပ်ဇာတ်ကြီးပါလို့ ပြောတဲ့သူတွေက ပြောခဲ့ကြတယ်...... ထပ်ပြောပါ့မယ် NLD၊ ကြံ့ဖွံ့၊ ဒီမို၊ စစ်တပ်၊ အားပြိုင်တယ်ဆိုတာ နိုင်ငံဆိုတာ ရှိနေလို့ပါ..... နိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အခြာ အာဏာသာ မရှိခဲ့ရင် ကျွန်တော်တို့ အားပြိုင်စရာ မရှိတော့ပါဘူး...... ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေဟာ ကောက်ရိုးမီးလို တစ်ခုထဲကိုသာ ခဏတဖြုတ် ၀ုန်းခနဲဆို ထလုပ်တတ်တဲ့ စိတ်တွေကြောင့် တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာ အရာပေါင်း များစွာကို လုပ်နေကြတဲ့ Multitasking နိုင်ငံများနဲ့ ယှဉ်ရာမှာ ခေတ်နောက်ကျနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်.....
ဒီကိစ္စဟာ အေးချမ်းသွားမှာ မဟုတ်ပါ..... နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်မှာ Buffer Zone အနေနဲ့ သူ့နိုင်ငံသား လူသားဖောက်တဲ့ စက်တွေကို ချထားပီး ပြဿနာ ဖန်တီးနေရာကနေ သမုဒ္ဒရာကိုပါ တစ်ဆင့်တိုး တောင်းဆိုလာနေပါပီ..... နောင်ဆိုရင် ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပါ သူတို့ ကြွေးကျော်နေတဲ့အတိုင်း အစ္စလာမ်မစ် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသဖြစ်လာအောင် စစ်ရေးကော နိုင်ငံရေးကော သုံးလာနိုင်တာကို အမျိုးသားရေး စိတ်ဓါတ်ဖြင့် ရှုမြင်ကြပါ ခင်ဗျာ........
မြန်မာ့သမိုင်းမှာတော့ အရှက်ရစရာနေ့ တစ်နေ့အဖြစ် ၁၄ရက် မတ်လကို မှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်ပါတယ်.... :(
By: James Mmt
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ ပြုပြင်ရန် အမေရိကန်သူဌေး ဒေါ်လာသန်းချီ ပေးမည်
ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဖြစ်ထွန်းလာရေးအတွက် အမေရိကန် သူဌေးတစ်ဦးက ဒေါ်လာသန်းချီ လှူဒါန်း သွားရန်ရှိသည်ဟု ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သိရ သည်။ အမေရိကန်ရှိ ဂျွန်ဟော့ကင်း တက္ကသိုလ်နှင့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တို့ သုတေသန လုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်နေကြကြောင်း ပူးပေါင်းခြင်း ကိစ္စများအတွက် ဒေါ်လာသန်း နှင့်ချီ၍ ကုန်ကျမည်ဖြစ်ရာ အမေ ရိကန်သူဌေးတစ်ဦးက ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပေးမည့် အမေရိကန် တက္ကသိုလ်အား လှူဒါန်းငွေ ပေးအပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ပညာရေး ဝန်ကြီး ဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအေးကြူက ပြောသည်။ ”ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကို ကမ္ဘာ က အသိအမှတ်ပြုတဲ့ အထိကို ဖြစ် အောင် လုပ်ဆောင်သွားမယ်”ဟု ဒုတိယဝန်ကြီးက ပြောသည်။ အမေရိကန် ထိပ်တန်း တက္က သိုလ်ကြီးမှ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပြုရန် နေပြည်တော်ရှိ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန မှ ထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ ကြပြီး ကန်တက္ကသိုလ်မှ တာဝန်ရှိ သူများ အဆင့်ဆင့် ထပ်မံ လာရောက်ရန်လည်း ရှိနေသည်ဟု ဒုတိယ ဝန်ကြီးက ဆိုသည်။ လက်ရှိအချိန်၌ ရန်ကုန်တက္က သိုလ်နှင့် မန္တလေးတက“္ကသိုလ် နှစ်ခု မှာ သုတေသန တက္ကသိုလ် အဆင့် သာ ရှိနေသေးရာ ရန်ကုန်တက္က သိုလ်ကို (National University) အမျိုးသားတက္ကသိုလ် အဆင့်အထိ ရောက်အောင် မျှော်မှန်းလုပ်ဆောင် ကြမည်ဟုလည်း ဒုတိယ ဝန်ကြီးက ထပ်လောင်းပြောသည်။ ”သုတေသန ပူးပေါင်းမှုကို တော့ အချိန်မကြာစေဘဲ မြန်မြန် ဆောင်ရွက်သွားမယ်” ဟု ဒုတိယ ဝန်ကြီးက ပြောသည်။ ၁၉၆၄ ခုနှစ် အထိ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်ကြီး၏ လက်အောက် တွင် ဆေးပညာ၊ စက်မှုပညာ အစရှိသည်ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်း ပညာရပ်များနှင့် တခြား သော ဝိဇ္ဇာ၊ သိပ္ပံပညာရပ် များမှာ မဟာဌာနများအနေနှင့် ရှိခဲ့သော် လည်း နောက်ပိုင်းတွင် မဟာဌာန အသီးသီးတို့ ခွဲထွက်၍ တက္ကသိုလ် များ တည်ထောင်ခြင်းများ ဆောင် ရွက်ခဲ့သည်။ လက်ရှိ တွင် မဟာ ဘွဲ့လွန် သင်တန်းများနှင့် ပါရဂူ ဘွဲ့ သင်တန်းတို့သာ ပို့ချပေးနေကြောင်း ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ထွန်းခင်က ပြောသည်။ ဆက်လက်၍ ဒေါက်တာထွန်း ခင်က ”ကျွန်တော့် အမြင်အရ ဆို ရင် အမေရိကန်တက္ကသိုလ်နဲ့ ရန် ကုန်တက္ကသိုလ်သာ ပူးပေါင်းလိုက် ရင်သင်ကြားရေးပိုင်းမှာလည်း နှစ် နိုင်ငံ တန်းတူဖြစ်သွားမယ်။ ဒီလိုပဲ သင်ရိုး၊ ညွှန်းတမ်းတွေလည်းကမ္ဘာ့ အဆင့်မီသွားမယ်။ ဒါ့အပြင် ရန် ကုန်တက္ကသိုလ်ဆီ ဧည့်ပါမောက္ခ တွေ လာကြမယ်။ သုတေသနတွေ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမယ် ဒီလိုပဲ ဒီက ထူးချွန်တဲ့ သူတွေလည်း ဟို ဘက်မှာ ဒီလိုပဲ သွားလုပ်ကြမယ်။ အားလုံးက မြန်မာ့ပညာရေး အဆင့်အတန်း ပိုမြင့်သွားဖို့ လုပ်ရပ် တွေကြီးပဲ” ဟု သုံးသပ်သည်။ စင်ကာပူ၊ တောင်ကိုရီးယား စသည့် နိုင်ငံတို့တွင်လည်း အမျိုး သားတက္ကသိုလ်များ ရှိပြီးဖြစ်နေရာ မြန်မာတွင်လည်း လုပ်လျှင်လုပ် သလို ဖြစ်မည့် အနေအထားမျိုး ရှိကြောင်း ဒေါက်တာထွန်းခင်က ထပ်လောင်းပြောသည်။ နိုင်ငံတကာပညာရေး အတိုင်ပင်ခံ ဒေါက်တာနေဝင်းနိုင်က မြန် မာနှင့် လာရောက်ပူးပေါင်းမည့် ဂျွန် ဟော့ကင်းတက္ကသိုလ်ဆိုသည်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံ၌သာမက ကမ္ဘာ ကပင် အသိအမှတ်ပြုထားပြီး သိက္ခာ ရှိသည့် တက္ကသိုလ်ဖြစ် ကြောင်း၊ ယနေ့မြန်မာ့ပညာရေးတွင် ခေတ်မီသင်ကြား နည်းစနစ်များ သုတေသနပစ္စည်းများနှင့် သင်ရိုး များ လိုအပ်မှုရှိနေသည့်အတွက် ၄င်းကိစ္စရပ်များပါ အလိုလိုဖြေရှင်း ပြီးသား ဖြစ်သွားလိမ့်မည်ဟု ယူဆ ကြောင်း ပြောသည်။ အိန္ဒိယတက္ကသိုလ်ရဲ့ လက် အောက်ခံတက္ကသိုလ်ခွဲတစ်ခုအနေ ဖြင့်သာ ရပ်တည်ခဲ့ရသည့် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်မှာ ၁၉၂ဝ ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဥပဒေ စတင်အာဏာတည်ခဲ့ပြီး ရန်ကုန်ကောလိပ်နှင့် ယုဒဿန် ကောလိပ် ကျောင်းနှစ်ကျောင်းကို ပေါင်း၍ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်အဖြစ် ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်၏ ပထမဆုံးအဓိပတိ မှာ မြန်မာပြည်ဒုတိယဘုရင်ခံ ဆာရယ်ဂျီနယ် ကရက်ဒေါက်ဖြစ်ပြီး လာမည့် ၂ဝ၂ဝ ခုနှစ်တွင် နှစ် ၁ဝဝ ပြည့်မြောက်တော့မည်ဟု မြန်မာ့ လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှု ရက်စဉ် သမိုင်းအရ သိရသည်။ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်ကို ၁၉၄ဝ -၁၉၅ဝ ခုနှစ် များတွင် အရှေ့တောင်အာရှ၌ အကောင်းဆုံး တက္ကသိုလ်အဆင့် သတ်မှတ်ခံရပြီး ၁၉၅ဝ-၁၉၆၂ခုနှစ် များတွင် အရှေ့တောင်အာရှ၌ ဒုတိယအဆင့်တက္ကသိုလ်အဖြစ် စာရင်းပေါက် ခဲ့သည်။
Posted by ရွှေနိုင်ငံ at 18:182comments:
နိုင်ငံတော်အတွင်း နိုင်ငံတော်၏တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်လျုက်၇ှိကြသည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား အပိုထောက်ပံ့ကြေး ခံစားခွင့်ပြုခြင်း ကြေငြာချက် အပြည့်အစုံ
ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးက ၁၃၇၃ ခုနှစ် တပေါင်းလပြည့်ကျော် (၇) ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက် ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြေညာစာ အမှတ် ၁၀၀/၂၀၁၂ ဖြင့် နိုင်ငံတော် အတွင်း နိုင်ငံတော်၏ တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်လျက်ရှိကြသည့် ၀န်ထမ်းများ၊ တပ်မတော် ကြည်း၊ရေ၊လေ ၀န်ထမ်းများအား စားဝတ်နေရေး သက်သာချောင် လည်မှုရှိစေရန် အတွက်အပိုထောက် ပံ့ကြေးထောက်ပံ့မည့် ကြေငြာချက်တစ်ရပ်ထုတ်ပြန် လိုက်ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည် ။
အဆိုပါအမိန့်ကြေငြာစာတွင် လက်ရှိလစာ အပြင်အပို ထောက်ပံ့ကြေး အဖြစ် တစ်ဦးလျှင် တစ်လ ကျပ် သုံးသောင်း တိတိ ခံစားခွင့်ပြုရန် ကိုလည်းကောင်း၊ အစိုးရဌာနများနှင့် အဖွဲ့စည်း များရှိ နေ့စား အလုပ်သမားများ၏ လုပ်ခကို အလုပ်ချိန် တစ်နေ့ (၈)နာရီ အတွက် လက်ရှိသတ်မှတ်ထားသော လုပ်ခ ကျပ် ၁၁၀၀ အပေါ်တွင် အပိုထောက်ပံ့ကြေး ကျပ် ၁၀၀၀ တိတိ ကို ထပ်မံခံ စားခွင့်ပြုမည် ဖြစ်သဖြင့် နေ့စားအလုပ်သမားများအား နေ့စဉ်လုပ်ခ ကျပ် ၂၁၀၀ တိတိ ခံစားခွင့်ပြုရန် ကိုလည်းကောင်း ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီ (၁)ရက်နေ့မှ စ၍ ခံစားခွင့်ပြုလိုက်သည်ဟု ဖေါ်ပြပါရှိပါသည် ။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ မတ်လ ၁ ရက်နေ့ မိန့်ခွန်းတွင် ၀န်ထမ်းများအား လစာတိုးခြင်း အစား ထောက်ပံ့မှုများ တိုးမြှင့်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပြီး နှစ်ပတ်အကြာ ယခုကဲ့သို့ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကိုးကား The Voice Weekly
Пайнг Со Facebook
ပြည်သူတွေ အပေါ် စစ်တပ်နှင့် ကေအိုင်အေ မည်သူက အကြမ်း...
တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များရှိ ဝေးလံခေါင်သီ၍ လူ...
မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံ ပင်လယ်နယ်နိမိတ် အြ...
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ ပြုပြင်ရန် အမေရိကန်သူ...
နိုင်ငံတော်အတွင်း နိုင်ငံတော်၏တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်လျ...